Deg deg: Halyeega Bollywood-ka Kader Khan oo geeriyooday sida qoyskiisa xaqiijiyeen – Filimside.net
Deg deg: Halyeega Bollywood-ka Kader Khan oo geeriyooday sida qoyskiisa xaqiijiyeen
Halyeega Bollywood-ka maqaamka sare ka gaaray mudada dheerna kusoo jiray Kader Khan aya geeriyooday sida ay qoyskiisa saxaafada u xaqiijiyeen asigoo sanadihii ugu dambeeyay xanuun sanaa sidoo kalena marar kala duwan baraha bulshada lagu faafiday inuu geeriyooday balse ugu dambeyntii wuu dunida wuu ka xijaabtay.
Kader Khan ayaa xalay 31 December 2018 ama habeenka sanadka cusub lasoo dhaweenayay 2019 ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada sida wiilkiisa Sarfaraz uu xaqiijiyay wuxuuna halyeegaan geeriyooday asigoo 81-jir ah.
Sarfaraz wuxuu yiri “Aabaheey wuu naga tagay, wuxuu geeriyooday 31 December 2018 saacada markay ahayd 6:00 pm xiliga Canada madaama uu mudo xanuunsanaa. Galabkaan ayuu koomo galay ama miirka beelay. Wuxuuna isbitaalka ku jiray 16 ilaa 17-todobaad ee ugu dambeesay.”
“Maanta ayaa Canada lagu aasi doonaa madaama qoyskeena oo dhan halkaan joogaan sidoo kalena halkaan ayaan ku wada nool nahay”
“Waxaan qof walbo uga mahad celineynaa ducada iyo rajo wanaaga aad noo muujiseen”
Shabakada Filimside waxay leedahay Allaha u naxariisto walaalkeen Kader Khan madaama uu Muslim ahaa.
Ilaahay ha u naxariisto Kader Khan.